Filtrer les éléments par date : dimanche, 04 octobre 2020
dimanche, 04 octobre 2020 19:49
Omeo ny Faritra atsimo ny harenany, foana ho azy ny mosary
Tsara avokoa ireo fikasana anavotra ny any Atsimo.
Ny faritra atsimo anefa no manan-kareny indrindra raha samy faritra eto Madagasikara, fa saronana foana amin'ny hoe faritra mahantra, tsy misy orana, kere...
Raha mijery ny harena ambanin'ny tany, anaty ranomasina, ambonin'ny tany, dia sady feno rano iny faritra atsimo iny, porofon'izany ny habehan'ny renirano any fa tsy voafehy, very andriaka aby, feno pétrole, feno gaz, feno safira, volamena, uranium, fasimainty, cobalt, nickel, mica, maniry ny zavatra rehetra ny tany, na fary, na vary, na katsaka, blé, coton,...
Fa olon-kafa avokoa no mitrandraka izany, ary dia fotsim-bary hatrany no aterina any, atao daholo izao projet rehetra izao.
Ny vahaolana maharitra any dia omeo andreo ny fananandreo, ireo manan-janaka nianatra maro.
Raha 50% monja no omena azy tantaniny, dia efa mihoatra ny 3000 miliara ariary isan-taona ny teti-bolandreo, efa antsasaky
dimanche, 04 octobre 2020 19:27
Mahasoa Nord – Andonaka (RN7): Zaza iray maty tsy tra-drano voahitsaky ny kamiao
Sarety tarihin’omby nitondra lehilahy iray sy ny zanany lahy, 10 taona, no nohosen’ny kamiao iray tao anaty tetezana tao Mahasoa Nord, Kaominina Andonaka, Distrika Ambalavao ny marainan’ny 3 oktobra 2020.
Ratsy hisatra ilay kamiao, ka tsy tafajanona raha tsy nandona ilay sarety. Nipitika tany anaty rano ilay sarety. Lavo ary voahosin’ny kodiarana aorian’ilay kamiao teo amin’ny lohany ilay zazalahy 10 taona, ary maty tsy tra-drano. Naratra mafy ny rainy.
Tery tao ambany kamiao ihany koa ny omby iray, ary maty.
Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary, nifarimbonan’ny avy amin’ny kaompania sy ny Brigady Ambalavao ary ny Poste Avancé Andonaka.
Toetr’andro: Orana, havandra, vovoka mitorajofo ary setroka mainty
Nirotsaka ny orana. Anisany nahazo ny faritra sasany teny Antananarivo Atsimondrano sy iny Anjozorobe iny.
Narahina havandra izany tamin’ny toerana sasany. Nanimba zavatra toy ny vokatry ny fambolena mihitsy raha ny tamin’iny manodidina an’i Mangamila mipaka hatrany Anjozorobe iny.
Vovoka mitorajofo no nandrakotra ny afovoany sy ilany avaratra atsinanan’Antananarivo renivohitra androany tolakandro.
Eo koa ny setroka mainty mandrakotra ny lanitra vokatry ny doro tanety eto afovoan-tany efa andro vitsivitsy izay.
dimanche, 04 octobre 2020 18:09
Mahasoabe - Vohipeno: Tovovavy iray saika niharan’ny fitsaram-bahoaka
Tovovavy iray nahiahiana ho nangalatra entana samihafa sy naka ankeriny zazavavy kely, 6 taona, no voasambotry ny fokonolona ary saika niharan’ny fitsaram-bahoaka tao Mahasoabe, Distrika Vohipeno ny 30 septambra 2020.
Tonga ara-potoana ny Zandary, nisakana tsy hisian’ny fitsaram-bahoaka, izay voararan’ny lalàna rahateo.
Notazomina tao amin’ny brigadin’i Vohipeno natao famotorana ilay tovovavy, mialoha ny hanolorana azy ny Fitsarana.
Tsy raikitra ny fihaonana amin’i Ghana fa raikitra ihany indray kosa ny fifampitsapana amin’i Burkina-Faso, araka ny fanazavana nataon’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea momba ireo fanomanantena mandritra ny fampivondronana hatao manomboka ny 5 ka hatramin’ny 13 oktobra 2020 izao.
Hanomboka any Luxembourg ny fampivondronana izay homarihina amin’ny lalao ara-pirahalahiana hihaonan’ny Barea aminny Swift Hesperange, klioba diviziona voalohany ao Luxembourg ny zoma 9 oktobra 2020.
dimanche, 04 octobre 2020 16:57
Ambohimitsimbina : Miaramila kilasy faharoa maty nitifi-tena
Miaramila iray, mbola tanora, 19 taona no maty nitifi-tena tamin’ny basy teny aminy.
Nandritra ny fotoana, izy niambina ny fotodrafitrasan’ny ORTM eny Ambohimitsimbina no niseho ny loza.
Tao anaty lozoka (cave) no niseho izany, tsy nisy naheno ny manodidina.
Tonga nanao fitsirihana ny faty teny an-toerana ny dokotera avy ao amin’ny hopitaly miaramila Soavinandriana, teo anatrehan’ny lehiben’ny toby iasan’ity miaramila ity sy ny mpanao fanadihadiana.
Miaramila kilasy faharoa ity nitifi-tena ity, ary miasa ao amin’ny Rezimanta Voalohany ny Jenia Miaramila Ampahibe.
Kaominina ambonivohitr'i Brickaville: Miandrandra fivoarana sy fandrosoana hatramin'ny ela ny mponina
Dingana mankany amin'izany hoy ny Governora RAFIDISON Richard Théodore ny fanatsarana endrika ny tanàna, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny làlana mba ialàna amin'ny fotaka.
Misy ifandraisany amin'ny "projet présidentiel" kianja manara-penitra PAUL BE efa andalam-pamitana koa, hoy Andriamatoa Governora, ny tetikasan-dàlana manodidina ny 01km tanterahin'ny faritra Atsinanana. Satria io làlana io, sy ny iray hafa mbola hamboarina any aoriana, no hanamora ny fidirana ao amin'io kianja io, na avy any amin'ny làlam-pirenena faha-2 na avy any antampon-tànana.
Taorian'ny fandalovan'ny Governora nitsidika nizaha ny fizotry ny asa ny 27 septambra lasa teo, dia efa am-pamaranana ny asa ny orin'asa manao izany amin'izao fotoana izao. Izany hoe tokony hifanindran-dàlana ny fahavitan'ny làlana sy ny kianja manara-penitra PAUL BE.
Madagasikara, amin’ny alalan-dRtoa Rosa Rakotozafy, no mitarika ny Comité InterGouvernemental de l'Education Physique et du Sport (CIGEPS) eo anivon’ny UNESCO.
Nanohavaozina nandritra ny fivoriana ara-potoana ny 28 sy 29 septambra 2020 teo ny birao.
Rosa Rakotozafy no filoha ho an’ny taom-piasana 2020 - 2021.
Sambany no nisy filoha vehivavy hatramin’ny 1978 nisian’ny CIGEPS.
Mitana andraikitra ambony eo anivon’ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena i Rosa Rakotozafy. Tale jeneralin’ny fanatanjahantena ity farany.
dimanche, 04 octobre 2020 14:04
4 octobre: Journée Mondiale des animaux.
dimanche, 04 octobre 2020 09:31
Covid-19: Mitohy 15 andro ny hamehana ara-pahasalamana
Araka ny fanapahana avy amin’ny Filohampirenena, rehefa nanontanin'ny hevitr'ireo filohan'ny andrim-panjakana, sy ireo ankolafin'asa isan-tokony, dia noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra natao ny 03 oktobra 2020 ny didim-panjakana hanohizana ny hamehana ara-pahasalamana hoentina mandrindra ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « Fahamehana ara-pahasalamana» manomboka ny 03 oktobra 2020 ary mihatra avy hatrany.
Ireo fepetra rehetra sy ny andinidininy mikasika ny lamina sy ny fandrindrana rehetra hoentina miatrika ny 15 andro manaraka dia hohazavain’ny Filoham-pirenena mandritra ny fandaharana manokana hotanterahana anio alahady 04 oktobra 2020 amin’ny 08 ora alina ao amin’ny Televizionina Malagasy, miainga avy any Taolagnaro.